China Easy Peel Aluminium Ucwecwe Induction Seal Liner ifektri kanye nabaphakeli | 品牌 名 / 公司 名
Incazelo kanye nomsebenzi wokufaka uphawu entanjeni yokufaka uphawu, okwaziwa kakhulu ngokuthi ulwelwesi lwesembozo, kubhekisa entweni yesembozo nolwelwesi engaveza umphumela wokuqina wokuqina ngesiqukathi. Lapha, iziqukathi zibhekisa emabhodleleni engilazi, amabhodlela epulasitiki namakani wensimbi. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamakhava, kufaka phakathi izifutho zesikulufu, izembozo zokuhudula, izigqoko zekepisi, izigqoko zokugoqa, izigqoko zokucindezela. Izinto zokwakha zibhekisa ezintweni ezingavala isembozo nesiqukathi ngokuqinile, Izinto ezinezidingo ezithile nezincazelo azinakho ukuvuza ngokuphelele. Ukuqinisekisa ukusebenza kwezimpahla ezihlanganisiwe kuhlala kungashintshiwe, ngokwesibonelo, uma ikhava isetshenziswa kuphela futhi kungekho ulwelwesi ezansi kwekhava, umphumela wokuvala kunzima ukuwuthola. Umsebenzi wokufakwa kukhulu kakhulu
Impahla eluhlaza: Aluminium ucwecwe, ifilimu, izinto zokunamathisela, uyinki, kuphela, njll
Uphawu Layer: PS, PP, PET, noma PE
Ubukhulu obujwayelekile: 0.24-0.38mm
Ububanzi obujwayelekile: 9mm - 182mm
Ukupakisha ikakhulukazi kuhlanzekile.
Amabhodlela we-Aluminium foil wephakeji ehlukile, amabhodlela e-PET / HDPE / PP / PS / PVC namabhodlela engilazi.
Ama-Sealing Induction Heat anamandla azinzile okuvala iziqukathi eziningi.
1. Izimpawu ezintsha
2. Vikela ukuvuza okubizayo
3. Nciphisa ubungozi bokuphazanyiswa, ukutholwa kwephapha, nokungcola
Yandisa impilo yeshalofu
5. Dala izimpawu ze-hermetic
6. Imvelo enobungane
Langaphambilini Phakamisa 'N' Ikhasi
Olandelayo: Ingcezu eyodwa ye-Induction Seal Liner ene-Backing